Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umlingisi weNkwenkwezi kwiFilimu eNtsha yoKhenketho yenkunzi ye-UAE
UJohn Cena ubambisene neSebe leNkcubeko noKhenketho e-Abu Dhabi (i-DCT Abu Dhabi) kwiphulo labo elitsha lezokhenketho, ekhuthaza abahambi ukuba babhukishe uhambo oluya kwikomkhulu- "stat."
Ukulandela ividiyo ye-teaser esungulwe kwiveki ephelileyo, ifilimu epheleleyo ekhutshwe namhlanje ibona uCena eshiya izicwangciso zakhe zokuhamba emva kokufunda ngo-Abu Dhabi kwindiza yakhe-eqaqambisa ukuba kutheni ngoku ilixesha lokundwendwela. Ukuntywila ngokoqobo kuyo yonke into oya kuyo, uCena uphuma ngaphandle kwenqwelomoya kunye nomhlaba ophahleni lwe-Louvre Abu Dhabi. Ividiyo ibonisa intaka-iliso lokujonga uhambo lukaCena ngakwindawo ezintle zase-Abu Dhabi, iindawo ezinomtsalane kumgangatho wehlabathi kunye nomdlalo wokuzonwabisa odumileyo.
Indawo yokukhanya kwelanga unyaka wonke kunye nendawo efanelekileyo yelanga lasebusika, i-Abu Dhabi ibonelela ngendawo kwindawo enye-efanelekileyo kubahambi abafuna ukuhambisa i-wanderlust yabo kunye nokwenza iinkumbulo ezintsha. Ukusuka kwindunduma ebaleka entlango ukuya ekuphumleni kwiilwandle zayo eziqhelekile, ukuthatha ubugcisa bayo obudlamkileyo nobangoku kunye nenkcubeko, okanye ujonge iindawo ezinomtsalane wosapho kunye neepaki zemixholo- likho ilizwe elinokubakho ngexesha lotyelelo oluya e-Abu Dhabi .
Ifilimu ikhutshwe emva kwesibhengezo sokuba i-Abu Dhabi yamkela bonke abahambi abagonyiweyo bamazwe aphesheya kunye nabo bahamba besuka kumazwe aLuhlu oluGayo babuyele kwi-Emirate, ngaphandle kwesidingo sokubekwa bodwa.